Xiangshan Chaoyu Machinery Manufacturing Co., Ltd. ise kwenye lesizwe top 100 counties kwiPhondo Zhejiang Xiangshan County Industrial Park, Xiangshan usingasiqithi ngumzi enzulu ezintle. Endleleni kwi Hangyong emendweni hlengiswe apha, ukuthuthwa yinto elula gqitha.
Okwangoku, inkampani ligubungela ummandla ukuya kwizigidi 1 square metres. Ngezixhobo imveliso phambili. Emva kweminyaka yakutshanje, kunye nophuhliso oluqhubekayo kunye nophuhliso, oyinxalenye iseti imigca ezintsha lwemveliso ekuphuhliseni imveliso zokusebenza uthungelwano ukuthengiswa kwenye ezizodwa lemveliso lwekhabhinethi.
Le nkampani iye yomelelani nincedwa ngamandla zobugcisa, izixhobo ngokupheleleyo yenqubo yokugaya, umgangatho imveliso, emva-intengiso yenkonzo ngokuvisisana nemilinganiselo ISO9000 ngamazwe zolawulo, ukubonelela abathengi kunye iimveliso ezisemgangathweni kunye neenkonzo. Ngelo xesha, inkampani ingqalelo ukuphucula ubugcisa kunye nophuhliso lwemveliso ezintsha, ukuze imveliso kwindawo ephambili shishino.
Company uza kuba Obusemagqabini ubunjani, ixabiso olufikelelekayo kunye nenkonzo ngolwazelelelo njengoko injongo ishishini. Kulo, inkampani bonke abasebenzi nkampani ukuba anyamekele nokuxhasa abathengi yenkampani wam kunye nabo ukuvakalisa umbulelo wam ongazenzisiyo!